Impala - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Le yimbi ye-antelope eqhelekileyo yeziqithi zaseMzantsi Afrika. I-antelope enomdla kakhulu, i-rufous-fawn antelope, eneemhlophe ezimhlophe, ilinganisa malunga ne-900mm kumahlombe. Iimitha zijikeleza ngeenxa zonke ezingama-60 Kg kunye neimazi ezingama-40 Kg.
Umgca omnyama uvela phezulu kwintonga ehlehla ngasemva kwethanga ngalinye. Imilenze yangaphantsi yezintambo ineengcingo ezingaphantsi kweengcingo zeenwele ezimnyama. Kuphela iinkunzi zeegusha ziphethe iimpondo eziyifom e-lyre, kwaye zifikelela ubude buka-700mm.
Umbono we-impala endle. I-Impala ngumxube oxubekileyo. Iphosa kwi-shrubbery kwaye idla ingca engqongileyo okanye kwindawo ephantsi. Ii-acacia pods kunye neziqhamo zithathwa xa zikhoyo.
Ukulandela ixesha lokunyuka kwamaxesha angama-194-200 amathole angatshatanga azalwa ngexesha lehlobo lasehlotyeni. Inyokazi ixhatshazwa ngokwesini kwiminyaka emibili ubudala. Iigusha ezincinci ziyakhula njengamawaka, kodwa zithintelwa ukuba zenze njalo ngeenkunzi zeegusha, ezilawula amathuba okuzala.
Imephu yemimandla ye-impala ifunyenwe kakhulu.Izikhundla zivame ukuzulazula ngaphezu kweekhilomitha ezisibhozo ukusuka ekunikezeni amanzi ngonaphakade. Eyaziwayo ngeencampu zazo ezikhangelekayo phezu kwezihlahla kunye nezihlahla, xa zityhafile. Ukubetha kwenzeka kwiinyanga zakuqala zasebusika.
Iigusha ezincinci zihlala kwiilusi zezilwanyana, kwaye abo banamandla ngokwaneleyo ukuba baphumelele ekumiseni imimandla, bahlala bodwa kwimimandla yabo ngexesha lolawulo. Abafazi bahlala ekuzaliseni iinkomo.
Impala ehlathini.Iindawo zokuhlala ezikhethiweyo zindawo zokuhlala zemihlaba yezithili ezisenyakatho neempuma zoMzantsi Afrika, nakwamanye amazwe.
I-Impala ixhaswa yiyona mininzi yemigodi ye-carnivores kwaye abancinci bahlala bexhamla kwi-Pythons. I-Impala ke isoloko isilumkile. Ukuba ngaba omnye wabo ubona ingozi, iya kuphazamisa i-alamu kwaye yonke imihlambi iya kuchithachitha. Ngenye yezinto eziphathekayo zendalo ukuba zibone i-antelope yenza i-3 meter ephezulu kunye neemitha ezili-12 ezide.
Imephu yeendawo eziqhelekileyo kuyo.
Igama lesiLatini: Aepyceros melampus
Ubunzima (Owesifa): 40 kg
Ubunzima (Owesilisa): 50 kg
Ixesha lokuGestation: 6,5 iinyanga
Akunabantwana abaselula: 1 imvana
Ukukhula koSondo: Iinyanga ezili-13
Isisindo sokuzalwa: 5 kg
I-Horn: 55 cm
Imephu yommandla abayifumaneka kakhulu.Umntwana ongenamzali uzalwa ukususela ngoSeptemba-Januwari emva kwenyanga yesiganeko malunga neenyanga ezi-6.
Iifolo zibukhali, zicoce kwaye zikhomba kunye ne-4 - 6 cm ubude.
Enye ye-antelope eqhelekileyo ye-savannah yase-Afrika, i-Impala iye yabizwa ngokuba yi-McDonald’s yehlathini njengoko ibona ixhoba eliqhelekileyo kubaxhamli. Imiqondiso yokuhlula kwi-rump ifana neenkampani zenkampani kwizinga.